ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 46.1 အဖေ့မွေးနေ့ အတွေးတစ
တရားမရှိတဲ့လူမို့ထင်ပါရဲ့.. အဲဒီစကားတွေ မကြားရဲဘူး.. ကျွန်မအဖေလည်း နိုဝင်ဘာမှာ 77 ပြည့်မှာ
ကံထူး(သူက ဆမိတ်ခုံ မှာကျောင်းဆရာ ခင်ဗျားတို့ ဆရာဖြစ်လောက်တယ် )ကို မာကြောင်းသာကြောင်းမေးပေးပါခင်ဗျာ
ကံထူးနဲ့ခိုင်မြဲ ဆမိတ်ခုံသား (၂)ယောက်နဲ့ 
ကျွန်တော်က မန်းတက္ကသိုလ်မှာ Geology အတူတက်
ကျွန်တော် ဗမာပြည်မပြန်ဖြစ်တာ (၅)နှစ်လောက်ရှိပြီ
ကျွန်တော် မြင်းခြံ ကပါ
e mail က
Thank u ပါခင်ဗျာ
စာလာဖတ်ပါတယ်။ ဖေဖေ့ကို ပိုသတိရလာတယ်။ ဖေဖေ့ကို မတွေ.ရတာ (၃)နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိ၊ ခလေးမွေး၊ အလုပ်က ခွင့်မရ၊ ဖေဖေကလည်းခေါ်တာကိုမလာ(အဲလောက်လေယဉ်ခ နှမြောတယ်၊ ဖေဖေ အသက်ကြီးပါပြီ၊ သမီးတို.မေမေကိုပဲခေါ်၊ ဖေဖေ့အတွက်ကုန်မယ့် ပိုက်ဆံ၊ တခြားသမီးတို. လိုတာသုံး နော်)ဆိုပြီး၊ မလာဘူးလေ။မတွေ.ရပေမယ့် ဒီစာကို ဖတ်ရတော့၊ စိတ်က ဘာမှန်းမသိတဲ. ကိုယ့်အဖေကို မြင်လာရသလိုပဲ။ ဆက်ရေးပါ၊ မျှော်နေပါတယ်။
စကားမစပ်၊ ကျွန်မ Ｍｅｇａ　Ｓｔｅｅｌ မှာ ၃လလောက် ဘာသာပြန်လုပ်ဘူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက တွေ.ဘူးခဲ့ကြသလားမသိဘူးနော်။ ( ကျွန်တော်တို.စက်ရုံရှေ.ဆိုပြီး ရိုက်ထားတဲ.ဓါတ်ပုံကိုတွေ.လို.ပါ။)
ကျွန်တော်ကတော့ အဖေနဲ့ ခွဲခွါရမယ့် ခံစားချက်ထက်.. ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အဖေ့ရဲ့အချိန်လေးတွေကိုပဲ ပိုပြီး အာရုံစိုက်ထားပါတယ်..။
(ဒါလည်း ပုံမှန်သဘောတရားအရ စဉ်းစားထားတာပါ.. အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ်တောင်သူ့ရှေ့က သွားနိုင်သေးတာပဲ..)
ဆရာဦးကံထူးနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးပါတယ်..။ အကို့ရဲ့ သတင်းစကား ရွာရောက်ရင် ပါးပေးပါ့မယ်..။
ဆရာဦးခိုင်မြဲကတော့.. အခုစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာ ဒေါက်တာခိုင်မြဲဖြစ်နေပြီလို့ ကြားပါတယ်..။
ဆရာဦးကံထူးနဲ့က စာတော့မသင်ခဲ့ရပါဘူး..။ ဒေါက်တာခိုင်မြဲနဲ့ကတော့.. ဂိုဏ်းတူညီအကိုတွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်..။
သူ သင်္ကန်းစီးခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျွန်တော်လည်း.. ကိုရင်ကြီး ရှစ်လလောက် ၀တ်ခဲ့ဖူးလို့ပါ..။
လူချင်းတော့ မရင်းနှီးကြပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့ လူလားမြောက်တော့.. သူက ရွာမှာ မနေသလောက် ဖြစ်သွားလို့.. သတင်းစကားလောက်ပဲ.. ကြားနေခဲ့ရပါတယ်..။
ကောင်းမွန်ဝင်းဆိုတာ ကျွန်တော်သိတဲ့ မမွန်များလား..။ mr. onishi အတွက် စကားပြန်လုပ်ပေးသွားတဲ့ တစ်ယောက်လေ..။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်..။
KO GYI လေး..
ဟုတ်ပ..။ စကားမပြောဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားပြီ..။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေရဲ့လား..။
ငွေထုတ်စက်လေး အသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ အဖေ့အကြောင်းရေးတော့မယ်ပေါ့။ အကို့ထုံးစံအတိုင်း ပွင့်လင်းပြီး သွက်သွက်မြူးမြူးနဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းမှာ အသေအချာပဲ။ ပိုစ့်အသစ်တွေကို အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ဆရာကြီးသော်တာဆွေလို စာရေးကောင်းလို့ 
ကျွန်တော်အခု ၀ါရှင်တန် ဒီစီ suburb area မှာနေတော့
စာအသစ်တွေ လဲမကြာမကြာ တင်ပေးပါ
blog ကိုအကြာကြီးပစ်မထားပါနဲ့ 
ဘလော့စပေါ့ ကို မြန်မာပြည်ကနေ ကြည့်လို့ ၇ပါသလား။ ဒို့ က စင်္ကာပူ ကနေ ကြည့်တာကတော့ အိုကေတယ်။
အချိန်ပြည့် အတူတူမနေနိုင်တဲ့ မိဘ နှစ်ပါး အကြောင်းတွေးနေမိရင်း ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ရင်ထဲက်ို မီးတောင်ပြင်းပြင်းတစ ဖြတ်ဝင်သွားသလိုပါပဲ...
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အချိန်လေးတွေကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်ဖို့ သတိပေးထားသလို ဖြစ်သွားတာ ကျေးဇူးသိပ်တင်ပါတယ်...
၇၇ နှစ်အထိ ဖခင်က ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးပါးကတော့ ၅၃ နှစ်ကတည်းက မရှိတော့တာမို့ သူများ သားအဖတွေမြင်ရင် ပါးပါးကိုသတိရမိတယ်။ ပါးပါးရဲ့ အဖေ အဘိုးကတော့ ၈၀ ကျော်ပြီ ကျန်းကျန်းမာမာရှိတယ်။ ကံတွေက ခွဲခြားပေးလိုက်တာလားပဲနော်။
ဖေဖေဆုံးတော့ ၅၈ နှစ်၊
အနှစ် ၂၀ လောက် ထပ်နေလို့ ရသေးရဲ့သားနဲ့ လို့ တွေးမိတယ်။
ကိုပွကြီးစာက ခေါင်းထဲမှာ ခေါင်းလောင်းသံတွေဆူညံသွားစေတယ်။
xxx အလိုဆန္ဒတွေနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ရင်း အချစ်နဲ့အမုန်းတွေကို အဖေ အလဲအလှယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်..။ xxx
အင်း.. ကိုနဗနရဲ့ အဖေနဲ့ "ရွယ်တူတချို့"တွေတောင် ကနေ့ထိ အလိုဆန္ဒတွေနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ရင်း အချစ်နဲ့အမုန်းတွေကို အလဲအလှယ်လုပ်နေဆဲပါဗျာ..၊ အဲ့ဒီတချို့တွေနဲ့စာရင်.. ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေမဲ့ ကိုနဗနရဲ့ အဖေကို အသက်ရှည် အနာမဲ့ပါစေကြောင်း မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးလျက်ပါခင်ဗျာ...။
အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုရယ် အမည် နဲ့ သိက္ခာအတွက် ကျားကန်ပြီး ဆက်လက်ချီတက်နေပါ၏။ အစ်ကိုကြီးလည်း အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျာ။
ခေါ်နေကျအတိုင်းခေါ်ချင်ပေမယ့် ဘလော့ဂ်မှာဆိုတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်. နောက်ပိုင်းမဖတ်ဖြစ်တာကြာပြီ.. ခုမှပြန်ဖတ်တော့လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကြောင်းတွေကို ဖတ်ချင်စရာကောင်းတဲ့အရေးအသားတွေ ဆန်းနေတုန်းဘဲ.
အဖေကတော့ ခု ၆၅ ရှိပြီ.. ကျန်းမာတုန်းဘဲ. အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ မြေးတွေရဲ့ ကိစ်စတွေနဲ့ ပင်စင်စားဘ၀ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းနေတယ်.. သားသမီးတွေ မြေးတွေကို အရမ်းဂရုစိုက်လွန်းလို့ အမေက မနာလိုဖြစ်တဲ့အထိဘဲ. ကျွန်မတို့လည်း ကိုယ့်မိသားစုကို ဂရုစိုက်၊ အလုပ်လုပ်နေတာနဲ့ အဖေ့ကို နေ့တိုင်းနီးပါးလည်း တွေ့ဖြစ်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးဘာညာ သိပ်ဂရုမစိုက်ပေးခဲ့နိုင်ဘူး.. အဖေက ကျန်းမာတာလည်းပါတာပေါ့လေ. ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာ(..)ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်ပြီးတော့ အဖေ့ကို ပိုဂရုစိုက်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးဖြစ်သွားတယ်. ရှိနေတုန်း၊ လုပ်ပေးနိုင်တုန်း၊ လုပ်ပေးသင့်တယ် ဆိုတာကိုပါ.. အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးဘဲ..
ညည်းဘယ်သူလဲလို့ ငါ့မှာ စဉ်းစားလိုက်ရတာ..။ ခုမှ သိတယ်..။
ဘလော့ဂ်မှာ ညည်းတို့ငါတို့ ကဲခဲ့တာတွေ ရေးရင် ကောင်းမလားလို့ တွေးနေမိတယ်..။ ဟဲဟဲ
အဖေ့အကြောင်းလေးဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဖေဖေကို သတိရမိသွားတာတော့ အမှန်ပဲ ...မတွေ့ရတာ ကြာနေပြီ
အကိုရေးသလို လက်ပျဉ်တွေလည်း တွဲကျနေပြီတဲ့လေ
(ကျနော့်ဘလော့မှာ အကို့ဘလော့လင့်ချိတ်ထားတာ update တွေ တက်မလာတော့ အသစ်တင်တာ မသိဘူး
ဖြစ်နေတာ အခုမှ အမှတ်မထင် ရောက်လာဖြစ်တယ်
အကိုရဲ့ ဘလော့ကို ပထမဆုံးစဖတ်တော့ တညလုံး မရပ်မနား ဖတ်ဖြစ်တယ် ကောင်းလွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ညွှန်းမိတယ်လေ
နောက်တော့ ကိုမင်းဒင်ဘလော့ကိုပါ ဖတ်ပြီးတော့
ကျနော် ဘလော့ရေးချင်စိတ် ဖြစ်မိသွားတာပါပဲ အဲဒါနဲ့ ဘလော့လေး လုပ်ဖြစ်သွားတယ်...။
အဖေ ဆိုတာ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲရှိနေလိမ့်မယ်လို့ သူငယ်နှပ်စား အတွေးလေး ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်လိုက်ပြီးမှ အားငယ်သွားသွားတယ်.။ အော် အဖေ လည်းလူသား ပါပဲနော်။ အချိန်တန်ရင် ကျွန်တော့် ကိုထားခဲ့မှာပဲ.။
စာရေးသူ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။ သံဝေဂနဲ့ အတူ ခံစားသွားပါတယ်.။
အကို့ Blog ကို အလွန်အထူး ကြိုက်နှစ်သက်လွန်း လို့link ယူသွားပါတယ်.. ခွင့်ပြုပါ။
လာဖတ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေကတော့ ၅၅ နှစ်မှာ Accident နဲ့ ဆုံးသွားပါတယ်။